Ruwaayad Qosol Oday Cabdulle Caynoosh Iyo Q 1
Fiidiyo Ruwaayad qosol oo ay jilayaan Oday Cabdulle, Caynoosh iyo dad kale oo magacyadooda garaneynin. Waxa...
Fiidiyo Ruwaayad qosol oo ay jilayaan Oday Cabdulle, Caynoosh iyo dad kale oo magacyadooda garaneynin. Waxaa la sameeyay dabayaaqadii 80aadka (1988 ama 89). Muusikada waxaa leh kooxda DurDur. Funny Somali Video Play made either 1988or 89. The play's music was made by DurDur
noinstreamads videofilm noonpageads qosol xsanoole durdur oday cabdulle caynoosh ruuwaayad jaajilo funny somali play